Dir ။ Adam Green သည်မင်းနှင့်အတူ 'Hatchet' ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုလိုသည်
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း Dir ။ Adam Green သည်သင်နှင့်အတူသူ၏ 'Hatchet' ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်လိုသည်
Dir ။ Adam Green သည်သင်နှင့်အတူသူ၏ 'Hatchet' ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်လိုသည်
by တိမောသေရောလ် ဧပြီလ 6, 2020
ကရေးသား တိမောသေရောလ် ဧပြီလ 6, 2020
ဒါရိုက်တာအာဒံဂရင်းကနေရာယူထားပေမယ့်ပရိသတ်တွေကိုအိပ်ရာပေါ်လှည့်လည်ပြီးလှည့်စားချင်နေတယ် အခမဲ့နာရီပါတီများ မိမိအလူသိအများဆုံးအကျင့်ကိုကျင့်၏။
“ သရုပ်ဆောင် / ထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်ရှင်မကြည့်ရဆင်ဆာဒါရိုက်တာရဲ့ဖြတ်တောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော့်ကိုပါ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ၊ ပရိသတ်တွေနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာအထီးကျန်နေသူတွေကိုအထီးကျန်နေစေမှာပါ။ ဗစ်တာ Crowley ကမ္ဘာသို့မျက်မှောက်ခေတ် slasher ဂိမ်းကိုမွေးထုတ်ခဲ့သည်” ဟု Green ကသူ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်ရေးသားခဲ့သည်။
ဒါရိုက်တာ Adam Green နှင့်မွေးကင်းစကလေး Arwen ။
ထို့ကြောင့် Green သည်သူခေါ်ဆိုသည့်စုပေါင်းလူမှုမီဒီယာကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည် Coronapocalypse အရာပြီးခဲ့သည့်လနှောင်းပိုင်းစတင်ခဲ့သည်။ Holliston, မိမိအထိတ်လန့် sitcom, ပြီးသားနှင့်ပိတ်မိ -on-a- နှင်းလျှောစီး - ဓာတ်လှေကားဂန္ထင်ရှားခဲ့သည် ရေခဲသော Aprilပြီလ3ရက်နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်သူ၏ magnum-နေပြည်တော်, အ ခုံ စီးရီးကလူအများဆုံးစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သူသည်မတ်လ ၅ ရက်တွင်ပထမဆုံးအခန်းကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက်သူသည်ကျော်ကြားသောဟယ်လိုဝင်းဘောင်းဘီတိုစီးရီးများသို့မသွားမီမတ်လ ၈ ရက်အထိပြသရန်စီစဉ်ထားသည်။
Hatchet2အင်္ဂါနေ့တွင်, အပိုင်း3ယနေ့ run လိမ့်မည် နောက်ဆုံးအခန်း ဗစ်တာ Crowley ဧပြီလ 8 ပေါ်မှာ။
ရုပ်ရှင်အားလုံးကိုမွန်းတည့် PST တွင်စတင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
သူ၏ထုတ်လုပ်မှုတံဆိပ် ArieScope တွင်aစာရင်းအပြည့်အစုံ 2011 ခုနှစ်ထိတ်လန့်ပေါင်းချုပ်တွေနှင့်အတူ airtime အဆုံးသတ်ရလိမ့်မည်ဟုအကြောင်းအရာ Chillerama writeပြီလ 18 ရက်နေ့တွင်သူရေးသားခဲ့သည်ကူညီပေးခဲ့သည်။
Green သည်မင်းကိုသူနှင့်စကားပြောရန်အချိန်ပေးနိုင်မည်၊ သို့မဟုတ်ယခုအချိန်တွင်ပျော်မွေ့ရန်နှင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောဂန္ထဝင်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်ဟုပြောသည်။
“ သင်သည်တိုက်ရိုက်ချတ်စကားတွင်ပါ ၀ င်သည်ဖြစ်စေ၊ ထိုင်။ ထိုင်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုက်ရိုက်ပြသသည် (ကြည့်ရှုလိုသည်မှာအချို့သောသူများ - ဤနေရာတွင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိပါ) ကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏ 'Coronapocalypse' စီးရီးသည်ထိုတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများထက် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်။ အခုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာပဲ!”
အစီအစဉ်၏နောက်ဆုံးသတင်းများအားလုံးအတွက်၊ Green ၏ Facebook ကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် ဒီမှာကြည့်ပါ.
Live Stream များကို ArieScope ၏ YouTube တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည် channel ကိုဒီမှာ.
Dua Lipa 'American Horror Story' တွင်ပါဝင်သလော သူမသည်ဒါဟာအဘို့အ Down ပါပဲ
'Dead Ringers' သရုပ်ဆောင် Shirley Douglas, Kiefer Sutherland ၏မိခင်သေသည်